Kenwood Meat Grinder (MG510) – Stainless Steel | Buy online | SHOP.COM.MM
Kenwood Meat Grinder (MG510) – Stainless Steel
Size: 30L x 37.5W x 29H cm
1600W maximum locked motor power
Die cast metal body with satin finish
3 stainless steel screens for fine, medium and coarse results
Kenwood ပစ္စည်းတွေအရမ်းသုံးလို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီအသားကြိတ်စက်ဆိုရင် မီးဖိုချောင်အမြဲဝင်နေရတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေ မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ Read more Hide
High performance mincing
This Kenwood meat grinder doesahigh performance mincing and the cleaning is effortlessly easy. Read more Hide
Kenwood ကအရမ်းကောင်းတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ပါ
အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး မီးဖိုချောင်အတွက် ရှိထားသင့်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ Read more Hide
Kenwood အမှတ်တံဆိပ် meat grinder လေးက သုံးရတာအရမ်းလွယ်ကူပြီး ဆေးကြောရလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ စတီးလ်ဖြစ်တာကြောင့် သံချေးမတက်ပါဘူး။ Read more Hide
Kenwood က meat grinder က တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။ ၁ မိနစ်ကို ၂ကီလိုထိတောင် ကြိတ်ပေးနိုင်လို့ အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းသက်သာပါတယ်။ ဆေးကြောရလွယ်ကူပြီး ဇကာပေါက်က ၃ ခုတောင်ပါတယ်။ ညီမတို့လို ဆိုင်သမားတွေအတွက်တော့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ Read more Hide
This 1600W Meat Grinder MG510 is the signature product in the Kenwood meat grinder range. Brushed metal body, and hopper, stainless steel mincer head and sturdy design makes it the perfect fit foramodern kitchen. It comes withadie cast metal hopper, with meat dish and dust cover, three mincing screens for fine, medium and coarse mince and separate attachments for making sausages and kebbe.
Sausage and kebbe maker attachment stored in the pusher
Meat Grinder (MG510) – Stainless Steel
Specifications of Meat Grinder (MG510) – Stainless Steel